Kutenderera kweFekitori - HUATAO GROUP LTD
Huatao Kambani inowirirana yekutengesa kambani yakanangana neChina Nyika, inotarisana nemhando dzese dzekunze uye bhizinesi rekutengesa kunze, mumiririri wekunze, mutengesi kunze, mutengi kutenga, zvinoenderana nemutengi zvinoda kupa zvakagadziriswa masevhisi. Iyo kambani ine rakasiyana bhizinesi, inonyanya kupa zvigadzirwa nemasevhisi kune epurpping indasitiri indasitiri, yekudhinda neyekupakata indasitiri, yekuvaka mainjiniya kana geotechnical zvigadzirwa zvekuvaka indasitiri, aluminium extrusion, yakanyanya tembiricha kupisa kuchinjisa kudhinda, kwemigodhi skrini indasitiri, metallurgy uye tsvina kurapwa fekitori. Yedu fekitori yakaunza epamberi zvigadzirwa zvekugadzira, inovimbika mhando yekuongorora michina uye yakaoma sisitimu yekugadzira manejimendi kuona kuti chigadzirwa chinokodzera pafekitori 100%.
1. Iyo Geosynthetic Fabric Kugadzira Lines:
2. Micheka yeindasitiri Kugadzira chirimwa:
3. Mapepa muchina wekugadzira Lines:
4.Pepa muchina chirongwa:
Kambani yedu inogamuchira chero OEM yekuodha kugadzira uye kugadzira, isu tichaomerera zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vezvinhu, maratidziro, kurongedza uye zvimwe zvinodiwa zvekuenzanisira maitiro, muyedzo yekuyedza mushure mekugona muhurongwa hwekugadzira kwakawanda. Kuchengetedza kugutsikana kwemutengi.
Fekitori yedu, sebhizimusi rinotungamira regeotechnical zvinhu muChina, ine nhoroondo yeR & D uye kugadzirwa kweanopfuura makore makumi mana.Ikambani ine 50 nyanzvi yesainzi uye tekinoroji R & Dtechnicians:
Polyweb Urethane Screen Mesh, Airgel Blanket, Corrugator Bhandi, Screen Mesh, Derrick Screen Mesh, Kuzvichenesa Screen Mesh,